Apple dia manamafy ny olan'ny fanakanana ny iPad Pro | Vaovao IPhone
Fotoana fohy taorian'ny nivarotana ny iPad Pro, rehefa tonga tany amin'ireo mpividy azy izany dia nanomboka nisy olana iray nipoitra tamin'ny internet nahatonga ny fitaovana hidin-trano, ka nahatonga azy tsy ho azo ampiasaina mihitsy. Tao Cupertino dia niaiky ny olana izy ireo ary manome toky fa ho avy tsy ho ela ny vahaolana, manolotra amin'izao fotoana izao ho hany vahaolana tokana ahafahana mamerina mamerina ny famerenana tanteraka ilay fitaovana ka mandeha ara-dalàna indray. Manome anao ny antsipiriany eto ambany izahay.
Ny olana dia miseho manokana rehefa voaloa ny fitaovana voalohany. Rehefa vita ary mahatratra 100% dia voasakana tanteraka ny iPad Pro nefa tsy mamaly na inona na inona ataontsika aminy. Maizina ny efijery, toy ny hoe novonoina izy io, saingy tsy azo alefa. Ny vahaolana? Toy ny mitranga matetika amin'ireto tranga ireto dia manaova "reset mafy": tsindrio ny bokotra fanombohana sy ny bokotra herinaratra miaraka amin'izay mandritra ny 10 segondra mandra-pahazava ny efijery ary hiseho eo afovoany ny sary famantarana paoma. Raha vantany vao vita ny famerenana dia hiasa tsara ny iPad ary ho voaloa tanteraka ny bateria.
Tsy fantatra ny antony nahatonga an'io olana io, ary tsy fantatra ny vahaolana momba izany amin'izao fotoana izao. Angamba noho ny olan'ny lozisialy ary noho ny fanavaozana azy ny vahaolana. Ny zavatra mampiahiahy indrindra dia ity olana ity tsy am-piheverana mihatra amin'ny mpampiasa ny maodely misy iPad Pro, ary tsy mitovy ihany koa. Misy ireo mpampiasa izay tsy nijaly tamin'ity fianjerana ity rehefa nametraka izany, ary ny hafa kosa nijaly. Raha ny iray amin'ireo mpihaino antsika izay nandray anjara tamin'izy io nitantara taminay ny zavatra niainany tamin'ny takelaka Apple dia nanamafy ny andro lasa izay tao amin'ny podcast anay, ny fiampangana voalohany no nahatonga azy nianjera, saingy rehefa nametraka azy fanindroany izy dia tsy nanana olana. Ho hitantsika eo ny vahaolana hitan'i Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Apple dia manamafy ny olana momba ny fianjerana iPad Pro
Mino aho fa ny fanajana ihany no tsy mandeha tsara intsony ilay fitaovana. Ankoatr'izay, amin'ny zavatra mendrika azy io, ny tsy fanajana azy.
Ny efijery tsy mamaly dia mandeha fa tsy mamaly ny mikasika
Valiny amin'i ADRIANA
Apple Pencil tsy mahomby amin'ny fanadinana iFixit